Umhla wokukhutshwa kwefowuni oqengqelekayo, ixabiso, amanqaku kunye neendaba
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Umhla wokukhutshwa kwefowuni ye-LG eqengqelekayo, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba
Umhla wokukhutshwa kwefowuni ye-LG eqengqelekayo, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba
Kanye xa iifowuni ziqala ukuziva zingasasebenzi ngokweendlela zoyilo, sabona ukwaziswa kweefowuni zesikrini esongwayo ezinje nge Galaxy Z Fold . Ke iifowuni ezimbini ezikwisikrini zibuyile ngo-2020, nge IMicrosoft Surface Duo kunye T-ezimilise Iphiko leLG .
Kwaye ngoku ngo-2021, thina & apos silindele isizukulwane esitsha esitsha see-smartphones- izinto ezinokuqengqeleka. Iinkampani zaseTshayina ezinje U-Oppo sele ehlekisile ngeefowuni ezisongelayo kwaye Isamsung inokuba inye kwimisebenzi , kodwa apha siza kugxila kwinto ebisebenza i-LG kwaye ngekhe yenzeke- ifowuni enokuqengqeleka ye-LG.
Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy Z Fold 2
Uphengululo lweSamsung ye-Samsung Z Flip
Uvavanyo lweMotorola Razr 2020
Uphengululo lweLing Wing
Umhla wokukhutshwa kwefowuni kunye negama
I-LG Rollable isenokungaze ikubone ukukhutshwa
Ngokwasekuqaleni iingxelo , I-LG eqengqelekayo ye-smartphone yayiza kufika nga-Matshi 2021 njengeyona mveliso intsha kwi-LG's Explorer Project. Nangona kunjalo, ngasekupheleni kukaJanuwari ngo-2021 iindaba zavela I-LG inokucima ishishini layo le-smartphone Lilonke, okanye ubuncinci ukusuka kude kwiiflethi zeefowuni, ezenziweyo Isiphelo seLG Rollable asiqinisekanga .
Nge-22 kaFebruwari, upapasho lwaseMzantsi Korea lwatyhola ukuba i-LG icele ukubonelelwa ngayo nqumama kwizicwangciso zabo zeLG Rollable . Phakathi ku-Matshi, kwafunyaniswa ukuba isixhobo esinegama 'I-LG Rollable' ifumene isatifikethi seBluetooth 5.2 , ebuyise umva wethemba lokuba i-LG Rollable iya kuyenza ukuba ithengise emva kwayo yonke loo nto.
Kodwa ngelishwa, ngo-Epreli 5th, 2020, Abakwa-LG babhengeze ngokusesikweni ukuba bayayeka ishishini leefowuni . Oku kusizisa kwakhona ekucingeni ukuba i-LG Rollable ayinakuze ikhutshwe.
Ngokuphathelele igama lomnxeba, besisazi ukusukela ngoNovemba 2020 ukuba LG bafaka uphawu lwentengiso kwi-European Union yamagama 'LG Rollable' kunye 'LG Slide'. NgoJanuwari 11, 2021, i-LG ibonise oku kulandelayo Teaser eqinisekisa igama eliQengqelekayo le-LG ngokwenene ibe nye:
I-LG Rollable ibonakalisiwe okokuqala ngqa! https://t.co/9efT3nK49B pic.twitter.com/BzlyOFQAHq
-IfowuniArena (@PhoneArena) NgoJanuwari 11, 2021
Ixabiso lefowuni eliqengqelekayo
Nangona singazange sibe nalo ulwazi olusemthethweni malunga nokuba ingabiza malini i-LG Rollable, thina & apos silindele amaxabiso aphezulu ee-smartphones ezazisa itekhnoloji entsha kwintengiso. Ezo, ezinje nge IGalaxy Z Fold 2 , IMotorola Razr 2020 Uluhlu lweMicrosoft Surface Duo naphina phakathi kwe- $ 1,400 kunye ne- $ 2,000. I-LG Rollable / Slide inokuba nexabiso ngokulula phakathi kwe- $ 1,400 kunye ne- $ 2,000.
Uyilo lwefowuni oluQengqelekayo kunye nesiboniso
Asinayo imifanekiso esemthethweni yefowuni, kodwa sinalo uluvo olunikezelweyo (luboniswe ngentla, ngoncedo lwe LetsGoDigital ), Ukwengeza kwi Imifanekiso yelungelo elilodwa lomenzi wamuva yeLG (kubonisiwe ngezantsi).
Ifowuni ye-LG eqengqelekayo iya kubonisa umboniso we-OLED oguqukayo, njengoko igama lefowuni liphakamisa, liya kuba nakho ukurola ngaphakathi kwindlu yefowuni xa umsebenzisi efuna ubungakanani obuqhelekileyo, obunamava efowuni. Xa umsebenzisi eyifuna ukuba ibe yithebhulethi, umboniso we-LG Rollable & apos; uya kukhutshwa ngokuzenzekelayo (kusetyenziswa isixhobo esihamba ngemoto), eguqula i-smartphone ibe yithebhulethi ye-intshi eyi-7.4.
Enkosi kwinto yokuba le yifowuni ebonisayo kwaye ayisongeki, ngekhe kubekho ndawo iphakathi esikrinini, njengathi & ampos; silindele ukusonga iifowuni. Ifowuni ye-LG eqengqelekayo kunye neapos; Umboniso awunayo inqaku elinye lokugoba.
Apha ngezantsi kukho umfanekiso ovela kwilog patable yefowuni yakudala eqengqelekayo, ebonisa uyilo lwangaphambili, olujikeleze ngakumbi olwaluqwalaselwe njengefowuni.
Umfanekiso ovela kwi-LG kunye neapos endala yefowuni yefowuni
Ukongeza, apha ngezantsi kunokwenzeka ukuba ibe lolunye uyilo oluQengqelekayo lwe-LG, umdlalo wesiboniso esincinci sangaphandle. Lo mfanekiso uvela kwelinye patent ye-LG ethe yavela nge-12 kaFebruwari.
Nge-6 ka-Epreli ka-2021, leTwitter ilandelayo yabonisa ukubonisa ukuba yeyiphi I-LG Rollable iya kubonakala ngathi , iphakamisa ukuba ifowuni ibikuzo zonke imeko okanye iphantse yagqitywa.
Le yi LG eqengqelekayo.
-Tron (@FrontTron) Epreli 6, 2021
Isoftware yefowuni enokushukunyiswa kunye nekhamera
Ifowuni iza kuqhuba i-Android 10 okanye mhlawumbi i-11, inonxibelelwano olusebenzise kakuhle kwimiboniso kunye neapos s simahla kwaye sisongele ngaphakathi kwaye sihlengahlengise indlela umsebenzisi ayiphethe ngayo ifowuni ngokokuqhelaniswa. Xa umboniso uqengqelekile emzimbeni wefowuni, i-LG Rollable iya kusebenza njengesiqhelo kwi-smartphone ye-Android. Kwaye xa umboniso uqengqelwe ngaphandle, ifowuni iya kuthi ivumele amava angenamthungo okwenza imisebenzi emininzi evulekileyo, ukuba umsebenzisi uyayifuna. Ukuba akunjalo, ifowuni iya kubonisa iapp enye okanye ividiyo okanye umdlalo kwinqanaba elikhulu.
Nanku umboniso wendlela yokusebenza kwe-Android eya kulungelelanisa ii-smartphones ezinokuqengqeleka njenge-LG Rollable, kuzo zombini ii-apos; standard 'kunye neendlela zokuboniswa ezisetyenzisiweyo:
Njengoko kucetyisiwe lelona patent lakhe lakutshanje, i-LG Rollable isenokungabinamaqhosha evolumu yomzimba, kodwa iya kuxhomekeka kulawulo lokuchukumisa isoftware. Ilungelo elilodwa lomenzi wechiza lakutsha nje kwifowuni enokuqengqeleka ye-LG ikwabonisa imodyuli yekhamera ethe nkqo ephethe iikhamera ezintathu, ubuncinci kuzo ezinokuba zibanzi.
I-nexus 5 x ubomi bebhetri
I-iphone 6s iiyure zobomi bebhetri
I-LG ibethe ityala lesenzo seklasi ngaphezulu kwengxaki ye-G4 kunye ne-V10 bootloop
I-Android 6.0.1 'Musa ukuphazamisa kude kube yinto elandelayo yealam'
Eyona ndlela iphambili yokukhuthaza iifowuni zokuthenga nge2021
I-Apple iPhone 11, ixabiso lePro kunye noMax kunye nomhla wokukhutshwa
Eyona midlalo ilungileyo yokujonga ividiyo eshukumayo kwifowuni yakho